မြန်မာ နဲ့ မြောက်ကိုရီးယား စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးကို အမေရိကန် ဘာကြောင့် စိုးရိမ်နေတာလဲ 5
ဧရာဝတီ ၊၂၅ ဇူလိုင် ၊၂၀၁၇
“မြန်မာနဲ့ အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ မြန်မာနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား သတင်းက ပြန်တက်လာတာ၊ အထူးသဖြင့် ကျနော်တို့ နားလည်ဖို့က ထရမ့်အစိုးရရဲ့လက်ထက်မှာ အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီက အရှေ့တောင် အာရှမှာဆိုရင် မြောက်ကိုရီးယားက အဓိက ပစ်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုက မြောက်ကိုရီးယား ပေါ့လေ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း တရုတ်နဲ့ US ကြားထဲမှာ ပထမဆုံး ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးမှု မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ရေဒါထဲမှာ ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါကြတော့ မြန်မာ ပေါ်လာတာပေါ့။ မြန်မာက အရေးကြီးတယ်”
Author — chit to
Author — Maynmar Hero
USA က သူနဲ့ကိုမလွတ်ဖူး နိုင်ငံကြီးဖြစ်လို့ နေရာတကာ လိုက်ပါနေတာပါကွာ
Author — Ven Siri nda
ကိုလူမျိုးအချင်းချင်းဘယ် ကချင်း ကရင် ရခိုင် မြန်မာ ကုလာ ဒါတွေ့ဘယ်တိုက်နေတာ ခွေးသတောင်လူကြီးအကုန်လုံး
Author — soe thu
ကိုယ်နိုင်ငံ ကိုယ်ပါကို လုပ်ချင်၇ာလုပ်မှာပေါ့ လီးလား
Author — Ko Gyi
မြန်မာပြည်မွဲသထက်မွဲရချည့် ဒီ မအလ
Author — Htun Linn
စောက်ရူး အရှေ့တောင်အာရှပြောပြီးမြောက် ကိုရီးယားတဲ့
Author — Myo Min
အလကားပါကွာ စောက်လုပ်မရှိ အလုပ်ရှာပြီး လျှောက်ပြောနေတာ
Author — สมใจ นารา
မဖြတ်တော့ လီးဖြစ်လား ကွာ us လဲသူ့ အကျိုးစီးပွား မရှိရင် မလာပါဘူးကွားမင်းတို့က ဖင်ခံနေတာကိုးကွ ဘ၀မေ့ကောင်တွေ စောင်တင်းပြောမှ ထမင်းစားရတဲ့ကောင်တွေ ဘယ်လိုကို့တိုင်းပြည် တိုးတက်အောင် လုပ်၇င်ရမလဲ လုပ်ကြပါ
Author — Mftsmartph ph
ပုလင်းတူ ~ ဘူးစို့မလို့ကမ္ဘာက ရွံတဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်
ပေါင်းစည်းနိုင်ကြတာပေါ့။ အမေရိကန် ကို ပြန် တိုက်ဘို့နှစ်နိုင်ငံပေါင်းစည်းထား
Author — Ko MgKo
ခင်ဗျားတို့တွေ စစ်ရူး.. ရူးနေလို့. ကမ္ဘာမအေးချမ်း ဖြစ်နေတာ
နှစ်နိုင်ငံပေါင်းပေါင်း U.S.A ကိုမနိုင်နိုင်ပါဘူး
Author — Ai Joseph
Mayanmer will be vanish from google earth map, if they start war against Bangladesh.
Author — Jannat Farabi
မြန်မာ အခက် တရုတ် အချက်လား
တရုတ်တွေကို တုန်လူပ်ခြောက်ခြားသွားစေတဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ နူုကလီးယား စီမံကိန်း
မြောက်ကိုရီးယား ဖျော်ဖြေရေးရဲ့ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ တောင်ကိုရီးယားရဲ့ ဂန်နန်ကို သွားရောက်လေ့လာ...
အပါခြီ ရဟတျယာဥျ နဲ့ S400 တပျဖွနျ့မယျ့အိန်ဒိယ
မြန်မာ ကျပ်ငွေစက္ကူနဲ့ နိုင်ငံခြားငွေစက္ကူ ဘာတွေ ကွာခြားသလဲ။
မွနျမာတပျမတျော SU-30 ဝယျယူတော့မညျလား
အိမ်နီးချင်းတွေ ကို တုန်လူပ်စေတဲ့ မြန်မာတပ်မတော် ၀ယ်ယူတဲ့ SY400
“ရတဲ့အလုပျလေးနဲ့ စားဝတျနရေေး ရပျတညျတာ အားပေးတယျ” (ရုပျ/သံ)
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးပုံ သုံးပွီး မဲဆှယျဦးမယျလို့ NLD ပွော